BKF Gadzira Chishandiso. BKF Kudzorera Software.
DataNumen BKF Repair ndiro yakanakisisa BKF kupora chishandiso munyika. Inogona kugadzirisa yakaora BKF mafaera uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa muhuori hwefaira.
4.90 / 5 (kubva 1,452 mavhoti)
Sei DataNumen BKF Repair?
# 1 Kudzorera
Miriyoni mazana matatu nemakumi matatu
Makore makumi maviri+ e
Tora Zvakawanda Kupfuura Vakwikwidzi Vedu
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kwe BKF kupora chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen BKF Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvakafanana neKudzorera kweBackup, uye zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika! Semutengo we DataNumen BKF Repair inodhura zvakanyanya kupfuura iyo yeKudzoreredza kweBackup, chigadzirwa chedu DataNumen BKF Repair ine yakanakisa mutengo / kuita reshiyo.
Avhareji Yekudzoreredza Rate
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen BKF Repair inoputa kukwikwidza
Vedu Vatengi 'Uchapupu
Inodiwa kudzoreredza Windows XP backup faira. Yako software yakashanda zvishamiso ...
Ini ndichanyatso kurudzira!
Cable Technology Laboratories
Nyowani Brunswick, NJ, USA
Ini ndaita sekureva kwako uye zvakashanda! Ndatenda nekundibatsira kutora makore gumi ebasa !!
Nevernind - yawana izvozvi, chinongedzo chakauya kuburikidza neemail zvakare, uye iyoyo yakashanda.
Yakanyanya Nyore interface
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen BKF Repair v2.9
Tsigiro yeWindows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 uye Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019.
Kutsigira kugadzirisa BKF mafaira akagadzirwa neWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XP uye Server 2003 backup zvinoshandiswa.
Kutsigira kugadzirisa BKF mafaera akagadzirwa neshanduro dzese dzeVeritas Backup Exec, pasi peWindows NT, Windows Server, Netware, OS / 2 kana Macintosh.
Kutsigira kudzoreredza dhata, vhoriyamu, dhairekitori chimiro uye mafaera mu BKF Archive.
Tsigiro yekudzosera yakamanikidzwa BKF matura.
Inogona kushandiswa sekomputa forensic chishandiso uye kuwanikwa kwemagetsi (kana e-kuwanikwa, eDiscovery) chishandiso.
Kutsigira kugadzirisa BKF mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch ye BKF mafaira.
Inotsigira kudzoreredza yakawanda-dhata uye yakawanda-vhoriyamu BKF matura.
Kutsigira kugadzirisa BKF mafaera akakura se16777216 TB (kureva 17179869184 GB).
Hapana manejimendi maropafadzo anodikanwa kudzosera BKF mafaira.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo BKF mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa BKF faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
Tsigira kudhonza & kudonhedza oparesheni.
Tsigiro yekuraira mutsara (DOS kukurumidza) parameter.
kushandisa DataNumen BKF Repair Kupora Uori BKF Files
Ona Vhidhiyo Dzidziso Bhaibheri Rizere
Ona Vhidhiyo Dzidziso (Demo Shanduro)
Kana zvako BKF mafaira akaora kana kukuvara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye haugone kuadzosa nemazvo, unogona kushandisa DataNumen BKF Repair kuongorora iyo BKF mafaera uye kudzoreredza yakawanda data kubva kwavari sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wawana chero huori kana kukuvara BKF faira ne DataNumen BKF Repair, ndapota vhara Microsoft Backup Utility uye chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo BKF ikwidzwe.
Sarudza yakaora kana yakakuvara BKF faira ichagadziriswa:
Unogona kuisa iyo BKF faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira.
By default, DataNumen BKF Repair ichagadzirisa zvinhu mu BKF faira wozvichengeta mudhairekitori xxxx_recovered, uko xxxx ndiyo sosi BKF zita refaira. Semuenzaniso, yefaira MyBackup.bkf , iyo yekuburitsa default dhairekitori ichave MyBackup_recovered. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kuisa zita rezita zvakananga kana kubaya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza dhairekitori.
Baya bhatani, uye DataNumen BKF Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi BKF faira. Kufambira mberi kubhawa
zvicharatidza kufambira mberi kwekugadzirisa.
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi BKF faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura dhairekitori MyBackup_recovered rine zvese zvakadzorerwa zvinhu mu BKF ikwidzwe.
DataNumen BKF Repair 2.9 inoburitswa muna Zvita 18, 2020
Chengetedza otomatiki zvigadzirwa.
Auto gadziridza kune yazvino vhezheni.
Gadzirisa zvimwe zvipembenene zvidiki.
DataNumen BKF Repair 2.7 inoburitswa munaNovember 4th, 2020
Kuvandudza mwero wekudzoreredza.
DataNumen BKF Repair 2.6 inoburitswa munaNovember 18th, 2019
DataNumen BKF Repair 2.5 inoburitswa muna Chivabvu 16, 2019
Tsigiro yekudzosera yakamanikidzwa BKF mafaira.
Dzorerazve injini yekugadzirisa batch.
Tsigiro yekuchengetedza batch yekugadzirisa danda.
DataNumen BKF Repair 2.2 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 17, 2013
Natsiridza kuenderana neiyo nyowani yekushandisa system Windows 7 ne8.
DataNumen BKF Repair 2.1 inoburitswa muna Zvita 1, 2010
Natsiridza kuenderana kweiyo GUI.
Natsiridza kukanganisa kwekuonekwa uye mushumo basa.
Natsiridza iko kushandiswa kweiyo GUI.
Gadzirisa bhagi mukugadzirisa mhosho meseji.
DataNumen BKF Repair 2.0 yakaburitswa muna Kubvumbi 2, 2009
Nyorazve chikumbiro chose uye injini yekugadzirisa.
Dzorerazve iyo GUI.
Gadzirisa iyo bug mukugadzirisa mazita emafaira.
DataNumen BKF Repair 1.2 inoburitswa muna Chikunguru 5th, 2006
Kuvandudza yekudzosa injini.
DataNumen BKF Repair 1.0 inoburitswa muna Chikumi 16, 2005
Chishandiso chine simba chekudzosera huori Microsoft backup (BKF) mafaera.
Archive dhata yekudzosa suite, kusanganisira ekudzosera maturu ehuwori Zip uye SFX zvinyorwa, RAR archives, Unix TAR zvinyorwa, uye Microsoft CAB matura.
Gadzirisa uye uwanezve huwori CAB matura.
Gadzirisa uye dzorera yakaora Unix TAR matura.
Gadzirisa uye uwanezve huwori Zip uye yekuzvitsvaga (SFX) mafaera.
DataNumen PowerPoint Recovery 1.9 inoburitswa munaKurume 12th, 2021
DataNumen Word Repair 4.2 inoburitswa munaKurume 10th, 2021
DataNumen Excel Repair 3.6 inoburitswa munaKurume 4th, 2021